Mitondra faisana hatramin’ireo tsy manan-tsiny… : ankizikely voatifitry ny jiolahy teo amin’ny kibony | NewsMada
Mitondra faisana hatramin’ireo tsy manan-tsiny… : ankizikely voatifitry ny jiolahy teo amin’ny kibony
Isan’ireo mbola miady amin’ny fahafatesana eny amin’ny hopitaly ilay ankizikely voatifitry ny jiolahy teo amin’ny kibony sy ny raim-pianakaviana iray voakapa sabatra teo amin’ny lohany, nandritra ny fanafihan-jiolahy nitranga teny Ambatomirahavavy, omaly alina. Araka ny fanazavana voaray teny an-toerana, andian-jiolahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no indray niditra an-keriny tao amin’ity tokantrano ity. Tampoka tamin’ireo niharam-boina ity fanafihana ity ka tsy afa-nanoatra izy ireo manoloana ny fitaovam-piadiana teny an-tanan’ireo mpanafika. Nitaky vola tamin’ny tompon-trano avy hatrany ry zalahy sady nandrahona hitifitra rehefa tsy manome ny vola izay tadiavin’izy ireo.
Tsy nihambahamba ireo olon-dratsy fa nitifitra avy hatrany ilay ankizikely vao 13 taona monja. Vokany, bala no niantefa teo amin’ny kibony. Voakapa sabatra teo amin’ny lohany kosa ny raim-pianakaviana iray hafa. Naratra mafy izy mianaka ireo. Tsy vitan’izay fa lehilahy iray hafa koa voatifitra teo amin’ny feny nandritra ny fanafihan’ireo jiolahy.
Habibiana tsotra izao no azo ilazana ity fanafihana nandratrana olona ity. Ankizikely tsy manan-tsiny no iharan’ny herisetran-jiolahy. Aiza ny fiarovana ny zon’ny ankizy indrindra amin’izao volana jona fankalazana ny andron’ny ankizy ireo.
Tsy vao izao fa matetika iharan’ny herisetra hatrany ny ankizikely noho ny herisetran’ny olon-dratsy toy izao.
Lasan’ireo mpanafika nandritra ny fanafihana ny entana sarobidy tao an-trano niampy ny vola. Lasa nitsoaka avy hatrany kosa ry zalahy taorian’izay. Ny zandary ao amin’ny borigadin’Ambatomirahavavy no manao ny fanadihadiana ity raharaha ity.
Manomboka tsy milamina koa ny tsy fandriampahalemana amin’iny faritra iny, araka ny filazan’ny mponina eny an-toerana.